Ukubaluleka Kokuhumusha Okusezingeni Eliphezulu | Izinkampani Zomthetho eDubai
Ukubaluleka kokuhumusha okusemthethweni kwekhwalithi ephezulu
Emhlabeni wezomthetho, ithemu ngalinye lenza umehluko. Kuyadingeka ukuthi sifunde ukwehlukanisa amagama athile kwabanye njengoba igama elilodwa lingathatha isinqumo esikweni elisemthethweni. Abahumushi bomphakathi bavame ukuqaphela kakhulu ngaso sonke isikhathi lapho benza umsebenzi abanawo ezandleni zabo ukuthi kungenzeka bashintshe wonke umongo wesimo.
Ibinzana elingenamqondo lingaholela enkingeni enkulu
Ukuxhumana okuhle phakathi kwabo bonke abantu
Ukuhumusha kuthatha isikhundla esiphakeme
Ukuhunyushwa okusemthethweni kube yingxenye ebalulekile yomhlaba yokuhumusha phakathi kwezilimi. Futhi bathola ukunakwa kakhulu lapho sikhuluma ngokuhumusha phakathi kwamasiko amabili ahlukile. Uma kukhulunywa ngokwanda kwebhizinisi, ukuhumusha kugqama kakhulu ngoba wonke umuntu kumele abe ekhasini linye. Wonke umuntu kufanele azi ukuthi kwenzekani nokuthi yini okukhulunywa ngayo. Yindlela kuphela lapho ibhizinisi lingachuma khona.
bakhulume ulimi olufanayo
Izinkampani ezinamagatsha amakhulu wobudlelwano namanye amazwe, ezikhuluma ngisho nezinye izilimi, zivame ukutshala imali eningi emnyangweni wazo wokuhumusha ngoba kubaluleke kakhulu kuzo ukuthi zikhulume ulimi olufanayo futhi zigcine umongo nenhloso yombhalo ngamunye.
Kepha ... kungenzeka kanjani ukuchaza lesi sici?
Lezi zinhlobo zokuhumusha zivame ukucacisa okuthile futhi zinomongo obanzi kakhulu. Izihloko ezimboziwe zichazwa ngangokunokwenzeka futhi umhumushi ngamunye kufanele akucabangele lokhu lapho wenza ukuhumusha. Eqinisweni, izinkampani ezinkulu ze-United Arab Emirates zihlala ziqasha abahumushi bomphakathi abaqeqeshiwe futhi banokuhlangenwe nakho kokusebenza ngalezi zinto.
Izinkampani ezinkulu zokuhumusha zomthetho zihlala zigxila ukunaka kwazo konke ekutholeni idokhumenti enhle kakhulu yamakhasimende abo. Ukuhumusha okusemthethweni futhi kuncike ezweni ngalinye kanye nesiko elingase libe nalo. Futhi le nto yokugcina ingenye yethonya elikhulu ekunqumeni ukuthi ukuhumusha okusemthethweni kwenziwe kahle noma cha. Noma yikuphi ukungahambisani kunoma iyiphi idokhumenti elihunyushiwe kungadala ukuphazamiseka noma ukuphazamiseka phakathi kwalabo ababandakanyeka kulesi simo.
Ukuhumusha okusemthethweni kudinga ukuqapha okukhulu
Into ebaluleke kakhulu ukwazi ukuthi abahumushi bangathola imiphumela esemthethweni yobukhulu obukhulu noma obuncane. Konke kuzoncika ekutheni bawaphatha kanjani umsebenzi abawenzayo. Ukuhunyushwa kwezomthetho kudinga ukuqapha okukhulu futhi kufanele kube nokunemba ngangokunokwenzeka ukuze konke kuhleliwe futhi akukho zinkinga ngomthetho.
Isisho esingasabalalisiwe singakuholela enkingeni enkulu phakathi kwezinhlangano zombili. Kungadala ukungezwani phakathi kwalabo abahilelekile uma kukhulunywa ngento ethile kwelinye isiko. Ekuqaleni, kungazwakala kukuhlanya okuncane kepha izinto ezingenzeka ngokuphelele ezivele zenzekile ngaphambili.
Mhlawumbe ukunakekelwa okungaka kungathatha umhumushi ukuthi athathe isikhathi eside ukwenza ukuhumusha. Kepha kuyadingeka. Ukunaka amagama onke azosetshenziswa kuyinto engeke ixoxiswane futhi engasoze yaba khona. Eqinisweni, isizathu sokuthi ukuhunyushwa kwemibhalo njengezinkontileka, izivumelwano, nemifelandawonye kuthatha isikhathi eside ukuthi abahumushi badinga ukwenza amasheke amaningi. Kunezikhathi lapho imibhalo ibuyekezwa ngaphezu kokuphindwe kathathu futhi kusatholakala amaphutha.
Ukuhunyushwa okuhle kwezomthetho kungaphezu kwesidingo ukuze konke kube ngokuthula nangokuhleleka. Ngaphezu kwalokho, uma ukutolika kuphumelela kakhudlwana, umlobi uzothuthukisa amandla akhe futhi asayinwe ezinye izinkampani eziningana ukwenza eminye imisebenzi eminingi.
Ulimi lomthetho olujwayelekile
Ngakolunye uhlangothi, abafundi bezilimi bebelokhu bezama ukugcina ulimi olusemthethweni olusemthethweni oluvumela ukuxhumana okuhle phakathi kwabo bonke abantu. Ukuhumusha okuhle kwezomthetho yilokho okwenziwa ngumhumushi owazi zombili izilimi ezibandakanyekile. Futhi hhayi kuphela ukuthi uyakwazi ukukhuluma futhi aphendule ngokushelelayo. Kepha uyazi indlela yakhe yokuyihumusha ukuze kuhunyushwe kuzo zombili izilimi into efanayo.
Ukuhunyushwa kwezomthetho kuncike ngokuphelele esimweni sesiko futhi kuyinto lapho bonke ochwepheshe bevumelana ngokwengeziwe. Ukubhala noma iyiphi inkinga yezomthetho kuyehluka ngezindlela eziningi. Umhumushi ngamunye uphatha umthwalo omkhulu ngoba akagcini ngokuba uchwepheshe wezilimi ezimbili kuphela kepha kumele azi ukuthi angahlukanisi kanjani izinto ezithile ezingasho okuthile okungafani nalinye isiko. Abahumushi banesibopho sokuhlinzeka ngokuhumusha okufanelekile ngenxa yazo zonke izinto ezenziwa ngamakhasimende ahilelekile.
Ukunemba lapho uhumusha
Ukuhumusha okunembile inqubo eyinkimbinkimbi kakhulu ehlanganisa ukuguquguquka kwezilimi ezimbili ezingase zingafani noma zingafani nhlobo kwezinye. Noma zifana, isici samasiko singaba nethonya elikhulu futhi umhumushi kufanele aqaphele izindaba ezithile zamanje nezakudala ukuze enze ukuhumusha okufanelekile kakhulu.
Ukubaluleka kokuhumusha okungokomthetho ukuthi kungahle kube nokuhlukahluka okuhlobene nendawo ngayinye, amasiko namanani emakethe. Lokhu kungenzeka futhi kungenye yezinto ezikhuluma kakhulu ngabatolika bomphakathi lapho befundiswa ukwenza umsebenzi wabo ngokuzayo. Umongo nencazelo yokuqukethwe kuhlobene nokuthi isetshenziswa kanjani isigatshana ngasinye.
Abahumushi bezomthetho badlala indima ebaluleke kakhulu
Idokhumenti esevele ihunyushwe isemthethweni enkampanini nasezweni. Akukhathalekile ukuthi ngabe sikhuluma nge-emirate nenye, uma bobabili abathintekayo sebekuvumile, lokhu kuhumusha okusemthethweni sekuvele kunomlingiswa ovumelekile ngaphakathi kwendawo kazwelonke nakwezinye izindawo lapho kubhaliswe khona.
Lokhu yilapho abahumushi bezomthetho bedlala indima ebaluleke kakhulu. Kukhona ezinye izindawo lapho ukuhlinzekelwa okusemthethweni kungashintshwa futhi yilapho kufanele kunake kakhulu. Idokhumenti ngayinye, kungakhathalekile ukuthi ilimi elihunyushelwe kuyo, kufanele ilandele uchungechunge lwezidingo ezingokomthetho ukuze babe nohlobo oluhle lokuthi luyadingeka ekuthobeleni izinhlaka ezithintekayo.
Isimo esingokomthetho sokuhumusha sesibe yinto eza kuqala futhi lokhu kwenza ochwepheshe abaningi babambe iqhaza kulo msebenzi. Noma ngabe ukhuluma nganoma yikuphi ukuguqulwa okuhunyushiwe, kufanele uthintane nabameli ngoba lokhu kusho izinhlinzeko ezithile zomthetho ezisebenza kulezi zinhlobo zamacala. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka ukuthi ukuguqulwa okubalulekile kwenziwe okungenzeka kube namaphutha futhi ngaleyo ndlela kuthintwe nabalingisi abahlukahlukene abayingxenye yalesi simo.
Ungazigwema kanjani izinkinga ngenkathi kuhunyushwa ngokusemthethweni
Ukugwema noma yiluphi uhlobo lokuphazamiseka, udinga ukuzibandakanya nalezi zinkampani ezikhethekile ekuhumusheni okusemthethweni. Bangochwepheshe abaqeqeshiwe kakhulu ukukunikeza ngezinsizakalo ozidingayo. Izinkampani zokuhumusha zomthetho zilungile njengoba zinikezela ngezinsizakalo zesitifiketi futhi zibhala ngemibhalo ehunyushwe ngokungakhathalekile ukuthi ungowakuphi.
Sebejwayele lolu hlobo lwamaphepha asemthethweni futhi bazokuvumela ukuthi ujabulele insiza efanelekile yokufakazelwa amaphutha. Bahle ngokwanele ukwenza konke kahle. Ukuhumusha okuhle kuyinto ezokuvumela ukuthi ufezekise bonke labo ababefakwe emaphepheni nalowo uzakwethu ozimisele ukukusekela noma ngabe uthini ngesiko. Ungaphuthelwa ithuba elihle ngoba wesaba ukuthi kungenzeka bangakuqondi.
Ngabahumushi bezomthetho abaqeqeshiwe nabanolwazi, konke kungenzeka. Ungabe usalilahla ithemba futhi usinike ithuba manje njengoba wazi ukubaluleka kokuhumusha okunembile kwezomthetho.
Izinsizakalo Zokuhunyushwa Kwezomthetho Zenziwe Lula
Ukuhunyushwa Kwezomthetho, Ukuhumusha Okujwayelekile, Ukubhala, ukubhala
Ukuhumusha okujwayelekile, ukuhunyushwa kwezokwelapha, umnotho kanye nokuhunyushwa kwezezimali, ukuhunyushwa kwezobuchwepheshe, ukuhumusha okuqukethwe kwabezindaba, ukuhunyushwa kwewebhusayithi, kanye nokuhunyushwa kwesoftware.
Ukuhunyushwa okusemthethweni okuvunyelwe nguMnyango Wezobulungiswa wase-UAE wesiNgisi nesi-Arabhu
Ukuhlela i-MOA ne-MOU AOA
Ukuzithoba, izwi-ngaphezulu, ukumaketha, nokuhumusha okukhangayo
Ungazise uma uzimisele ukudingida ukubhala okubhaliwe okungenzeka, ukuhumusha, nezinsizakalo zokuphrinta ezihlanganisiwe.
Ikhwalithi kanye Nenkonzo ngesikhathi
Izinsizakalo ezihunyushiwe zokuhumusha kumanxusa kanye nezinsizakalo zokuhumusha ngokusemthethweni kwezinhlangano zikahulumeni nezamabhizinisi azimele.
Copyright © 2021 Law Firms Dubai | Inikwe amandla yiCopper Communications